Guggenheim ပြတိုက်မှ Andy Warhol နှင့် Louise Bourgeois | ခရီးသွားသတင်း
Guggenheim ပြတိုက်မှ Andy Warhol နှင့် Louise Bourgeois
မော်နီကာဆန် | | ဘေလ်ဘောင်မြို့, ယဉျကြေးမှု, အချိန်အား
အနုပညာပြတိုက်ကိုသင်ကြိုက်လား? နှင့်ခေတ်သစ်အနုပညာ? သို့ဆိုလျှင် Bilbao ရှိ Guggenheim ပြတိုက်သို့သွားရန်သင့်အားကျွန်ုပ်ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်အတိအကျဒီမဟုတ်အခြား? ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မင်းဟာနွေရာသီတစ်လျှောက်လုံးကြီးကျယ်တဲ့အနုပညာရှင် ၂ ယောက်ရဲ့ပြပွဲနှစ်ခုကိုကြည့်ဖို့ပါ။ Louise Bourgeois နှင့် Andy Warhol တို့ဖြစ်သည်။
မင်းရဲ့လက်ရာတချို့ကိုမင်းတို့မြင်အောင်မင်းတို့သွားမှာပါ၊ ဒါကြောင့်အဲ့ဒီကိုသွားရတာဘယ်လောက်ကောင်းလိုက်မလဲဆိုတာကိုသင်မြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ ခင်ဗျားကျွန်တော့ကိုမယုံကြည်ဘူး? ထွက်ခွာသည်။
1 Louise Bourgeois ပြပွဲ - ဆဲလ်များ
1.1 Luoise Bourgeois ကဘယ်သူလဲ။
2 အန်ဒီ Warhol ပြပွဲ - Shadows
2.1 Andy Warhol ကဘယ်သူလဲ။
3 Guggenheim ပြတိုက်နာရီနှင့်နှုန်းထားများ
Louise Bourgeois ပြပွဲ - ဆဲလ်များ
Louise ၏လက်ရာများသည်မယုံနိုင်လောက်အောင်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည်။ ဒီအနုပညာရှင်ဟာ ၂၀၁၀ ခုနှစ်မှာကွယ်လွန်သွားခဲ့ပြီး ၂၀ ရာစုမှာသြဇာအရှိဆုံးသူတစ်ယောက်ပါ။ သူမသည်အလွန်ဆန်းသစ်တီထွင်သောကြောင့်သူမ၏အလုပ်တစ်ခုကိုသင်တွေ့တိုင်းမင်းသည်စာအုပ်တစ်အုပ်ကိုဖွင့်ပြီးကိုယ်ပိုင်ဇာတ်လမ်း၊ အနုပညာရှင်ဘ ၀ ၏ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ကိုမြင်ရသကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ အနည်းငယ်ပိုပြီးဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှာဖွေနေ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ရှာပါ.
Guggenheim ပြတိုက်မှပြသခဲ့သည့်အဆိုပါပြပွဲကို The Cells ဟုခေါ်သည်။ ၎င်းသည် ၁၉၈၆ ခုနှစ်တွင် Articulated Den နှင့်စတင်ခဲ့သောစီးရီးမှပထမဆုံးအပိုင်း ၅၀ အပါအ ၀ င်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ၆၀ ခန့်ကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ကြောက်ရွံ့မှုသို့မဟုတ်မလုံခြုံမှုစသည့်ဆဲလ်တစ်ခုစီတွင်စိတ်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုကိုဖော်ပြသည်။ ပရိဘောဂများ၊ ပန်းပုများ၊ အဝတ်အထည်များနှင့်အရာ ၀ တ္ထုများကိုတင်ဆက်ထားပြီး၎င်းသည်သင့်မျက်လုံးကိုဖယ်ရှားရန်ခက်ခဲသောအထိစိတ်ခံစားမှုပြင်းထန်သည်။
ထိုဖော်ပြချက်မဟုတ်ပါဘူး လူ့စိတ်ကိုချက်ချင်းစတင်မြင်ယောင်ကြည့်ပါလိမ့်မယ် Bourgeois ရဲ့အတိတ်ကအရာတွေ။
ဆဲလ်ပုံတူ, ပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ပြသရှိရာ, ဒါပေမယ့်ခန္ဓာကိုယ်ဒါပေမယ့်လည်းသူရှိခဲ့ဇာတ်ကောင် intuited နိုင်ပါတယ်ဘယ်မှာ။
ငါကအားလုံးကိုပေးသူသည်အယ်ဒီတာ Benjamin Shiff ၏ပူးပေါင်းမှုဖြင့် ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သောအက္ခရာခြောက်လုံးပါရှိသည်။
ပီသသော lairသူမ၏ဆဲလ်၏ပထမ ဦး ဆုံးအဖြစ်အနုပညာရှင်ကစဉ်းစား။ ၎င်းသည်တိရိစ္ဆာန်တစ်ခု၏လုံခြုံမှုကိုရည်ညွှန်းသည့် "ဥယျာဉ်" ရှိခြင်းအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာရှိသည်။ အလယ်ဗဟိုတွင်အနက်ရောင်ထိုင်ခုံတစ်ခုသည်မျက်နှာပြင်မှချိတ်ဆွဲထားသည့်အနက်ရောင်ရာဘာပစ္စည်းများဖြင့်ဝိုင်းရံထားသည်။ ၎င်းတွင်သင်လွတ်မြောက်နိုင်သောတံခါးလည်းရှိသည်။
အံ့ဘွယ်သောအမှုကုန်သည်ကြီးများအသင်း၁၉၄၃ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၀ ခုနှစ်အတွင်းသူလုပ်ခဲ့သောမတူကွဲပြားသောပန်းပုများ၊ မော်ဒယ်များနှင့်ပန်းချီကားများဖြစ်သော၎င်းတို့အားလုံးသည်၎င်းတို့အားဖယ်ရှားပစ်နိုင်သကဲ့သို့အဆိုးဆုံးအတွေးများ၊
Dangerous Passage သည်ကလေးဘဝတုန်းကပုံပြင်တစ်ပုဒ်ဖြစ်သည်စက္ကူများသို့မဟုတ်အပွောငျးအလဲမြားကဲ့သို့သောအရာဝတ္ထုများသည်ပလတ်စတစ်စက်များဖြင့်ထိန်းသိမ်းထားသောတိရိစ္ဆာန်အရိုးများနှင့်ရောနှောပြီးအသက်နှင့်သေခြင်းသံသရာနှင့်သံလိုက်ပင့်ကူများနှင့်ကြေးမုံတို့ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုသတိရစေသည်။
ဆဲလ် I-VI ကို, သင်သည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနာကျင်မှုသို့ delve ရှိရာနေရာများဖြစ်ကြသည်။
အနီရောင်အခန်း (ကလေး) နှင့်အနီရောင်အခန်း (မိဘများ)ဤဆဲလ်နှစ်ခုနှင့်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုဆက်စပ်နေသည်။ ပထမတွင်အိပ်ယာကိုပန်းချီဆရာ၏ကလေးဘဝနှင့်ကလေးဘဝမှနေ့စဉ်အရာဝတ္ထုများပါ ၀ င်သည်။ ဥပမာ - သူမ၏အထည်အလိပ်အလုပ်ရုံတွင်သူမ၏မိဘများအသုံးပြုသည့်အပ်များ။ ဒုတိယတွင်သပ်သပ်ရပ်ရပ်ရှိပြီးပိုမိုရင်းနှီးသောအိပ်ခန်းကိုပြသည်။
ဒီအလုပ်ကိုနှစ်သက်ပါ စက်တင်ဘာ ၂ ရက်အထိ အဆိုပါ 2016 ။
Luoise Bourgeois ကဘယ်သူလဲ။
ဒီမယုံနိုင်လောက်တဲ့အနုပညာရှင်ကို ၁၉၁၁ ခုနှစ်မှာပဲရစ်မှာမွေးဖွားခဲ့ပြီးနယူးယောက်မှာ ၂၀၁၀ ခုနှစ်မှာကွယ်လွန်သွားခဲ့တယ်။ သူဟာရှုပ်ထွေးတဲ့ကလေးဘဝနဲ့ကလေးဘဝရှိခဲ့ပြီးအနုပညာမှာသူမကိုယ်တိုင်၊ သူ့မိသားစု၊ သူနေထိုင်တဲ့ကမ္ဘာအကြောင်းအဖြေရှာခဲ့ပါတယ်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ, ဟာသအကြီးအသဘောမျိုးရှိခဲ့ပါတယ်သူ၏လမ်းစဉ်၌ရှိသောစိန်ခေါ်မှုများကိုရင်ဆိုင်ရန်သူ့ကိုလှည့်။
သူဟာအရမ်းတက်ကြွတဲ့လူတစ်ယောက်ပါ။ ဒီသက်သေပြဒီပြပွဲသည်။ သူသည်အသက် ၇၀ ကျော်အရွယ်၌သူ၏ဘဝကုန်ဆုံးရန်ဆဲလ်များ၌စတင်အလုပ်လုပ်သည်ကိုသင်သိပါသလား။ အတိတ်ကာလကယနေ့ကဲ့သို့ပင်သူသည်ပင်ကိုစွမ်းရည်အသစ်များကိုလှုံ့ဆော်သူဖြစ်သည်။
အန်ဒီ Warhol ပြပွဲ - Shadows
Image - Bill Jacobson
Andy Warhol (၁၉၂၈-၁၉၈၇) သည် Pittsburgh တွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီးနယူးယောက်၌ထူးဆန်းစွာသေဆုံးခဲ့သည်။ သူ့ကိုငြီးငွေ့ဖွယ်စွဲမက်ဖွယ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးသူ၏အနုပညာသည်ထိုကဲ့သို့သောအရာမဟုတ်ဟုထင်ခဲ့သော်လည်းဒစ္စကိုအလှဆင်ခြင်းဖြစ်သည်ဟုသူကဆိုခဲ့သည်။ Bilbao ရှိ Guggenheim ပြတိုက်မှပြသသည့်ပြပွဲ၊ ၎င်းသည်သင်၏ရုံးခန်းရှိအရိပ်၏ဓာတ်ပုံပေါ်တွင်အခြေခံသည်။ မင်းအနုပညာကိုအရိပ်နဲ့လုပ်နိုင်တယ်လို့ဘယ်သူမှပြောမှာမဟုတ်ဘူး၊ ကောင်လေးကသူလုပ်ခဲ့တယ်။
ပြသထားသည့်အမှု ၁၀၂ ခုသည် ၁၉၇၈ မှ ၁၉၈၀ အတွင်းပန်းချီကားများဖြစ်သည်။ ၁၀၂ ခုရှိသည် ဒါတစ်ခုတည်းပဲအများအပြားအစိတ်အပိုင်းများသို့ခွဲခြား။ တစ်ခုချင်းစီတွင်၎င်း၏အရောင်များကွဲပြားသော်လည်းတူညီသောအရိပ်များရှိသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းတို့သည်အတူတူဖြစ်သည်ဟုထင်နိုင်သော်လည်းမှားလိမ့်မည်။ ပန်းချီကားတိုင်းတွင်အလင်းဆီသို့ကြည့်နေသည့်နေရာတစ်ခုကိုဖော်ပြသည်။
သင်ဤအလုပ်ကိုပျော်မွေ့နိုင်သည် အောက်တိုဘာ2အထိ အဆိုပါ 2016 ။
Andy Warhol ကဘယ်သူလဲ။
ဤသူသည်အမေရိကန်ပန်းချီဆရာနှင့်ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးသူဖြစ်သည် ပေါ့ပ်အနုပညာကိုမွေးဖွားခြင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်းတို့တွင်အဓိကအခန်းကဏ္မှပါဝင်ခဲ့သည်။ သူဘ ၀ ၌တင်ပြခဲ့သောအကျင့်များသည်လက်တွေ့ပြက်ရယ်ခြင်းဟုမကြာခဏမှတ်ယူလေ့ရှိပြီးယနေ့အချိန်၌ပင်လူတို့သည်သူ၏စိတ်ကိုနားလည်ရန်ဆက်လက်ကြိုးစားနေသည် အဖြစ်ကောင်းစွာအနုပညာရှင်နှင့်ပညာတတ်အကြားကနေစွဲ။
ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းဘဝမှာတစ်ချိန်ကဖြစ်ပျက်တာတွေရှိလို့အနုပညာရှင် Louis Bourgeois နဲ့ The Andell Warhol ရဲ့ The Shellows ပြပွဲကိုကြည့်ပြီးပျော်မွေ့နိုင်တယ်။ 10 a.m. ထံမှ 20 p.m. မှအင်္ဂါနေ့မှတနင်္ဂနွေ။။ နှုန်းထားများမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်
အငြိမ်းစားများ - ၉ ယူရို
၂၆ နှစ်အောက်ကျောင်းသားများ - ၉ ယူရို
ထိုသို့သငျသညျကိုသိသောအရေးပါသည် ပြတိုက်မပိတ်မီနာရီဝက်အလိုတွင်ရုံးခန်းပိတ်သွားပြီး ၁၅ မိနစ်မတိုင်မီကအခန်းများကိုနှင်ထုတ်သည် တူညီတဲ့၏ပိတ်ပွဲ၏။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » စပိန်မြို့ကြီးများ » ဘေလ်ဘောင်မြို့ » Guggenheim ပြတိုက်မှ Andy Warhol နှင့် Louise Bourgeois